छविलाल रानाभाट - कान्तिपुर समाचार
छविलाल रानाभाटका लेखहरु :
नीति भनेको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो । कुनै पनि कार्यक्रमको भिजन–मिसनदेखि साना क्रियाकलापहरूबाट आउने प्रतिफल नीतिले समेटेको हुनुपर्छ । आधारभूत रूपमा नीतिले कार्यक्रम, बजेट र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
नेपालले विकासमा फड्को मारोस् भनेर विभिन्न प्रयास गर्दा पनि कछुवा गति किन भएको होला ? ठूलठूला परियोजनामा सधैं गुणस्तरको प्रश्न किन उठेको होला ? सधैं असार–साउनमा हतार–हतार किन डोजर चलाइएको होला ? काठमाडौँ उपत्यकाका बाटाघाटा प्राय: किन भत्काइरहेका होलान् ?
स्वास्थ्यनीतिको अभ्यास २०१३ देखि सुरु भएको हो । त्यस बेलादेखि नै पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएको थियो । २०१३ देखि २०४६ सालसम्म स्वास्थ्यको आफ्नै नीति थिएन । स्वास्थ्य विकासका अन्य नीतिको परिपूरक मात्र थियो । २०४६ सालमा आधुनिक चिकित्सा विस्तार गर्न संरचना बनाउनु, जनशक्ति उत्पादन गर्नु र जनस्वास्थ्यका समस्या परियोजनामार्फत सञ्चालन गर्नु थियो ।